संविधान संशोधन विधेयकः उपेन्द्र यादव विपक्षमा! महन्थ र राजेन्द्र पक्षमा – GoldenKhabar.com
संविधान संशोधन विधेयकः उपेन्द्र यादव विपक्षमा! महन्थ र राजेन्द्र पक्षमा
काठमाडौं, २० पुस । संविधान संशोधन प्रस्तावले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्र विवाद सिर्जना भएको छ ।
संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकमा कुनै परिवर्तन नहुने अडानमा सरकार छ । र, यो अडानलाई मधेसी मोर्चामा रहेका दुई दलका शीर्ष नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले स्वीकार गरेका छन् । साथै संसदबाट पास गराउन लबिङ पनि गरिरहेका छन् ।
तर, अर्का नेता उपेन्द्र यादव भने संशोधन विधेयक परिमार्जन भएपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने संशोधन विधेयकले मधेसी मोर्चाभित्र पनि दुई धार सिर्जना गरिदिएको छ ।
हुन त प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका विपक्षी दलहरुको माग पनि फिर्ता लिएर राजनीति सहमतिमा परिमार्जन गरेर पुनः प्रस्ताव अगाडि बढाउनु नै हो । तर, सरकार आफ्नै अडानमा यथावत छ । यहाँनेर उपेन्द्र यादवको अडान एमालेसँग मिल्दोजिल्दो छ । भलै परिमार्जनका विषय फरक होलान् । त्यसैगरी महन्थ र राजेन्द्रको अडान सरकारसँग मिल्छ ।
अहिलेकै विधेयक पारित गराउन महन्थ र राजेन्द्रको लबिङ
भन्न त महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पनि संशोधन विधेयक परिमार्जन गरेर पारित गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । तर, विपक्षी दलहरुको आन्दोलनले अहिलेकै विधेयक पारित गराउन दुबैलाई दबाब परेको छ र लबिङ पनि सुरु गरेका छन् ।
यसैक्रममा मंगलबार महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा मधेसी मोर्चाको टोलीले सोमबार विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसँग संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्न आग्रह गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित फोरम लोकतान्त्रिक संसदीय दलमा सोमबार दिउँसो पुगेका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीलगायत मोर्चा नेताले समर्थनका लागि गच्छदारलाई आग्रह गरेका थिए ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग १६ बुँदे सहमति गरेको पर्सिपल्ट गत वर्ष जेठ २७ गते मधेसी मोर्चाबाट गच्छदारलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका मोर्चा नेताहरू अहिले संविधान संशोधन पास गर्नका निम्ति उनैलाई सम्झन पुगेका हुन् । संसदमा फोरम लोकतान्त्रिकको १४ सिट छ ।
तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालका अनुसार संशोधन पारित गराउन भूमिका खेल्नेबारे फोरमसँग सकारात्मक कुराकानी भएको र मोर्चाको प्रस्तावमा सहयोग गर्ने बचन गच्छदारले दिएका छन् ।
ठाकुरकै नेतृत्वमा रहेको मोर्चा टोलीले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपासँग संशोधन विधेयकमा मनाउन संवाद थालेको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव मान्य छैन, सदनमा फेल हुन्छः उपेन्द्र यादव
यता संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले एमालेले संसदको अबरोध फिर्ता गरेपनि संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई आफूहरूले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
एमालेको अबरोधका कारण संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै एमालेले सदनको अबरोध खुला गर्न लचिलो भएको अर्को दिन मधेसी मोर्चाका प्रभावशाली नेता यादवले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको बताए ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कमा बुधबार बिहान पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई यथाअवस्था स्वीकार गर्न सकिँदैन । परिमार्जन गरेर ल्याउनुपर्छ । होइन भने त्यसको जिम्मेवारी कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले लिनुपर्छ ।’
उनले मधेसीहरूलाई धोका दिन संशोधन प्रस्ताव ल्याएको दाबी गरे । ‘यसलाई मान्दैनौँ । प्रस्ताव अलपत्र पर्छ’, उनले भने, ‘परिमार्जनसहित आएन भने संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन छैन । त्यसको जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवाले लिन्छन् ।’
अध्यक्ष यादवले संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने जिम्मेवारी र दायित्व आफूहरूको नरहेको बताए । ‘यसलाई पारित गराउने जिम्मेवारी हाम्रो होइन । कांग्रेस र माओवादीले बुझ्नुपर्छ । नेपाली जनताले यो संविधान स्वीकारेकै छैन’, उनले भने ।